Imizobo yoNqabiso engaqhelekanga kaNatalie yaseIreland | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umzobi osekwe eHouston UNatalie waseIreland, yenza imizobo emihle ngesixhobo esingaqhelekanga, iisos. Udala imifanekiso ngaphandle kwakhe imilebe yomlomo efana nepeyinti yakhe kunye nemilebe efana nebrashi yakhe. Ukusetyenziswa kwakhe kobuqili bemihla ngemihla kwenza ukuba eli gcisa lifunwe, apho enze khona udliwanondlebe olungenakubalwa. Emva koko sikushiya i vidiyo wegcisa.
Ubanga ukuba ebesenza ubugcisa ukusukela esibelekweni. Ke ngelixa inokuba iyinyani, iIrelandwoman ibonisa ubuchwephesha kwezobugcisa kwiinkalo ezahlukeneyo zobugcisa ezinokuza kuphela iminyaka yamava. Ukusukela ukuba wayeseIreland wayengeyontombazana, ebengumzobo njengoko ezibhengeza ngokwakhe upende kunye umfanekiso oqingqiweyo Kube ngumnqweno wakhe, ukulahla imihlathi yakhe kunye nokumbambisa udumo. Ukude ekwenzeni imizobo emile ngxi ngepensile kunye neebrashi, eqingqa ngehashe, ukupeyinta ngeoyile, i-acrylic, inki kunye nelipstick. I-Irish ngokwenyani ingumfundi kuyo yonke into kwaye igqwesa kuyo yonke indawo yobugcisa ayizamayo.
Iziqwenga zakhe ezithembisayo nezinomdla zingaphezulu kwako konke Imizobo ephethe imilebe yomlomo kunye nemilomo. Ukutshintsha ubungakanani kunye noxinzelelo lomlomo kwilaphu, I-Ireland idala imveliso egqityiweyo enganeli nje ukukholisa ubuhle, iyachukumisa ngobugcisa. Ubonakalisiwe kwiibhloko ezininzi zobugcisa, kwaye wamkelwe ngehlombe ngabathandi bezobugcisa kwihlabathi liphela.
Uyigugu eliyinyani lehlabathi lobugcisa, igcisa lokwenyani kunqabile ukuba libone kwezi ntsuku. Akayihlikihli ipeyinti kwinqanawa, kwaye akenzi imisebenzi yakhe ngentsingiselo enzulu yefilosofi. Usebenzisa nje umzimba wakhe wendalo ukwenza amanye amalungu endalo kwinqanawa, kwaye iyimpumelelo. Umzobo ngumzobo.
Fuente| UNatalie waseIreland
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imizobo kaNatalie yaseIreland engaqhelekanga
'Ezinzulwini zobusuku eParis' kwioyile ngu-Ángel Villanueva